Qorshaha waxbarasho iyo shaqo-abbur: manhaj iyo shaqo-abuur ku xidhan baahida dhallinyarada – Vote Cirro – Presidential Election 2017 Somaliland
„Waxaynu isku xidhi doonaa waxbarashadda iyo dhaqaalaha annagoo ubalan-qaadeynaa ardeydda Somaliland waxbarasho kaabeysa xirfadooda mustaqbalka, sidoo kale waxaanu horumarin doonaa ganacsiyaddi hore ujirey si aanu shaqo-abuur cusub u samayno islamarkaana kor uqaadno wax-soo-saarkeena.“
- Abdirahman Mohamed Abdullahi
Xukuumadda waddani waxay kordhin doontaa mushaharka macalimiinta 100%.
Waxaanu bixin doonaa 15% fiiga ardeyda dugsiyada somaliland odhan.
Waxaanu samayn doona manhaj cusub kaasoo ka turjumaya baahida jirta anaggoo kaashanaynaa ganacsatada, wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare, wasaaradda qorshaynta qaranka iyo daneeyayaasha kale bulshada dhaqanka si aanu u samayno manhaj ardeyda ka caawinaya inay helaan xirfadaha iyo aqoonta looga baahanyahay dhaqaalaha somaliland. Manhajka waxaa dib-u-eegis lagu samayn doonaa sannad kasta si loo horumariyo bulshada somaliland lagana ilbaxiyo qaab bulsheedka qabaliga ah.
Shaqo-abuurka dhallinyarada: si aanu shaqooyin cusub u abuurno waxaanu horumarin doona ganacsiyadii hore islamarkaana hindisaya ganacsiyo cusub.
UJEEDOYIINKA UGU MUHIIMSAN:
In warshado waddanka laga dhiso si lacagta adag waddanka inoogu kaydsanto
In dibada aynu wax udhofino si lacag adagi waddanka uso gasho.
Qiyaas ahaan waxaanu samayn doona ugu yaraan 9,000 ilaa 12,000 shaqo.
Xoolaha nool: oo ah laf dhabarta dhaqaalaheena iyo shaqo-abuur sidaas darted waxaan horumarin doonaa kaabayaasha u muhiimka ah si loo kobciyo dhoofka xoolaha iyo wax soo saarkiisaba. Kaabayaasha u muhiimka ah dhoofka xoolaha waxaa ka mid ah biyaha, xisbiga waddani wuxuu balan qaadey inuu dhisayo warshado biyaha badda soo sifeeya. Dhismaha warshadahan iyo markay shaqo galaanba waxay abuuri doonaan shaqooyin badan. Waxaa kalo ka mid ah warshadaha la samayn doono warshadaha hilibka iyo qaboojiyaasha kuwaaso Iyana sameyn doona shaqo-abuur balaadhan.
Loojistikada: himilooyinka xisbiga waddani waxaa ka mid ah inuu noqdo saaxibka koowaad ee ganacsi ee itoobiya ku leedahahay gobolka geeska afrika. Korodhka dhoofka iyo soo dejinta alaabta waddanka itoobiya wuxuu keenaya baahi ku timaada adeegyada isu socodka iyo transitka somaliland dhexdeeda sidaas darteed xukuumada waddani waxay isku taxalujinaysaa inay horumariso adeegyadda isu-socodka iyo is-gaadhsiinta sida wadooyinka, bakhaarada alaabta transitka iyo barxado ganacsi (business parks), dhamaan adeegyadaas oo la tartami kara kuwa geeska afrika.
Warshaddaha: balan-qaadyadi xisbiga waddani waxaa ka mid ahaa inuu hirgelinayo warshad biyaha badda soo sifeeya, warshadahani markay biyaha sifeeyaan hadhaaga kasoo baxayaa waxaa ka mida biyo milix badan kuwaaso laga sii sifeyn karo milix aysiidh iyo lye (saltic acid and lye) labaddan kiimiko waxay aasas uyihiin oo loo isticmaala samaynta saabuunta iyo waxyaabo kale oo badan. Sidaa darteed waxay samaynayaan wax soo saar iyo inaynu dhoofin karno.
SIDEE AYAY QORSHAYAASHANI U SUURTAGALINAYAAN SHAQO-ABUUR?
Hirgelinta mashaaricdani (warshadaha iwm) waxaa ka dhalanaya shaqo-abuur.
Dhisida iyo ka midha-dhalinta mashaariicdani waxay shaqo-abuur ka sameynayaan nawaaxiga goobaha iyo deeganada laga hirgalinayo.
Mashaaricdani sida biyaha, loojistikada iyo warshadaha kiimikadu waxay shaqo-abuur usamaynayaan dhallinyarada leh xirfadaha gaadhi wadista, mekanikska, saynisyahanada, inijineero, maamuulka iyo maareynta iwm.
Sidoo kale mashaaricdani waxay hirgelinayaan in la sameeyo shirkado iyo ganacsi cusub sida shirkado waddanka ku warshadeeya wax soo saarkeena, shirkado iibiya wax soo saarkeena iyo kuwo dhoofiya. Dhamaan mashaaricdani waxay sii kordhinayaan baahida adeegyada ganacsiyadii hore u jirey sida maqaayadaha, dukaamada iwm.
Guud ahaan, rejada xukuumada waddani ay shacabka la wadaagto waa inaynu hirgelino siyaasad iyo qorshayaal kobciya oo horumariya dhaqaalaheena. Sidaas darteed waxaan isku taxalujin doonaa inaanu hirgelino xeerar, kaabayaal iyo deegaan ku haboon oo dhiirigelinaya inay somaliland hesho maalgashi caalami iyo mid guddaha ah. Xukuumada waddani maaha mid la tartamaysa ama rabta inay suuqa ka saarto ganacsiyada gaarka ah laakiin waxaanu doonaynaa inaanu taageerno oo kobcino ganacsiyada gaarka loo leeyahay, anagoo gacmaha is haysana aynu horumarino bulshadeena taagta darran iyo waddankeena somaliland oo idil, islamarkaana ka tagno aayatiin dhaxal-gal ah u ah ubadkeena iyo jiilka cusub, dhidibadana u aasno qaran taaba gala.